China emeputa nke ikanam High Bay Light, ikanam High Bay Light
Nkọwa:LED High Bay Light,LED High Bay Light,,,,
Home > Ngwaahịa > LED High Bay Light > LED High Bay Light
Ngwaahịa nke LED High Bay Light , anyị bụ ndị na-emepụta ọkachamara si China, LED High Bay Light , LED High Bay Light suppliers / factory, wholesale high-quality products of R & D and manufacturing, anyị nwere ọrụ zuru ezu mgbe-ahịa na nkwado teknụzụ. Le anya n'ihu na nkwado gị!
150W E40 / E39 / E27 LED High Bay Light  Kpọtụrụ ugbu a
Igwe anaghị egbochi mmiri E40 100W 150W 200W High Bay Light  Kpọtụrụ ugbu a
UFO E27 E39 E40 base Led Warehouse Light  Kpọtụrụ ugbu a
High lumen DOB butere ọkụ dị elu E40 / E39 / E27 bulb Industrial Canopy Light  Kpọtụrụ ugbu a
60 ° / 90 ° / 120 ° beam angle 100W UFO LED High Bay Light  Kpọtụrụ ugbu a
SMD 2835 50w DOB UFO LED High Bay Light Flash  Kpọtụrụ ugbu a
400W IP65 Mmiri na-adịghị ahụkebe Water Highlight Light  Kpọtụrụ ugbu a
Akwa Elu na-esi n'èzí na-enwu ọkụ na 3030 Chip  Kpọtụrụ ugbu a
Ọnụ mmiri dị elu 120w na-eme ka ndị na-enwu ọkụ  Kpọtụrụ ugbu a
100W IP65 125lm / w LED High Bay Light  Kpọtụrụ ugbu a
500W LED High Bay Light LED Flood Lighting  Kpọtụrụ ugbu a
150W AC 85-305V 3/5 Afọ akwụkwọ ikike LED High Bay Lighting  Kpọtụrụ ugbu a
EC RoHs LED High Bay Light for Warehouse  Kpọtụrụ ugbu a
Ime ụlọ na ime ụlọ Industrial 100W LED Highbay Light  Kpọtụrụ ugbu a
Industrial Meanwell Na-efu Ọganihu 100W LED Highbay Light  Kpọtụrụ ugbu a
Shenzhen 100W-500W N'èzí LED High Bay Light  Kpọtụrụ ugbu a
Ike elu High-lumen Industrial LED High Bay Light  Kpọtụrụ ugbu a
Waterproof ikanam High Bay Light 240 Watts  Kpọtụrụ ugbu a
Bright 100W LED High Bay Light Industrial  Kpọtụrụ ugbu a
Ụlọ ọrụ na-eji 200W LED Elu Bay Light  Kpọtụrụ ugbu a
Ọkpụkpụ Ezi Ọkụ 150W LED High Bay Light  Kpọtụrụ ugbu a
Ọnụahịa otu: USD 37.2 / Piece/Pieces
150W E40 / E39 / E27 LED High Bay Light Otu uru nke Ufo Led High Bay Light bụ na ọ na-eme ka ọkụ na-enwu gbaa nke ihe dị n’okpuru ya. Ofdị dị iche iche nke ndị na-atụgharị uche nwere ike rụpụta ụdị ọrụ ọrụ ọkụ dị iche iche maka ọkụ ọkụ. Aluminom...
Igwe anaghị egbochi mmiri E40 100W 150W 200W High Bay Light
Ọnụahịa otu: USD 27.6 / Piece/Pieces
Igwe anaghị egbochi mmiri E40 100W 150W 200W High Bay Light Dị ka aha ha na-egosi, a na-eji UFO LED High Bay ọkụ mee ka oghere dị elu na-enwu oghere. Nke a na-abụkarị uko ụlọ sitere na ukwu 20 rue ihe dị ka ukwu 45. … N’ihi na ebe elu-elu nwere...
UFO E27 E39 E40 base Led Warehouse Light
Ọnụahịa otu: USD 22.8 / Piece/Pieces
UFO E27 E39 E40 base Led Warehouse Light Ebere ọkụ ọkụ anyi nke elu igwe anaghị agba n’elu maka ụlọ elu na mpaghara sara mbara. Ha na-elekwasị anya ọkụ karịa mepụta ọkụ dị ike na oke ogologo. Nke a na - eme ka ha zuo oke maka ngwa azụmahịa na ụlọ...
High lumen DOB butere ọkụ dị elu E40 / E39 / E27 bulb Industrial Canopy Light
Ọnụahịa otu: USD 21.6 / Piece/Pieces
High lumen DOB butere ọkụ dị elu E40 / E39 / E27 bulb Industrial Canopy Light 60W LED High Bay Light na-ejikarị ụlọ ọrụ mmepụta ihe, ụlọ nkwakọba ihe, ngafe, ụlọ elu, wdg. Ihe aka ya nwere ike idozi oriọna oriọna. Igwe ọkụ a na-enwu ọkụ, LED High...
60 ° / 90 ° / 120 ° beam angle 100W UFO LED High Bay Light
Ọnụahịa otu: USD 20.91 / Piece/Pieces
60 ° / 90 ° / 120 ° beam angle 100W UFO LED High Bay Light 100W LED High Bay Light na-ejikarị ụlọ ọrụ mmepụta ihe, ụlọ nkwakọba ihe, ngafe, ụlọ elu, wdg. Ihe aka ya nwere ike idozi oriọna oriọna. Igwe ọkụ a na-enwu ọkụ, LED High Bay Light nwere ụdị...
SMD 2835 50w DOB UFO LED High Bay Light Flash
Ọnụahịa otu: USD 15.6 / Piece/Pieces
SMD 2835 50w DOB UFO LED High Bay Light Flash 60W LED High Bay Light na-ejikarị ụlọ ọrụ mmepụta ihe, ụlọ nkwakọba ihe, ngafe, ụlọ elu, wdg. Ihe aka ya nwere ike idozi oriọna oriọna. Igwe ọkụ a na-enwu ọkụ, LED High Bay Light nwere ụdị ọkwọ ụgbọala...
400W IP65 Mmiri na-adịghị ahụkebe Water Highlight Light
Ọnụahịa otu: USD 244.3 / Piece/Pieces
400W IP65 Mmiri na-adịghị ahụkebe Water Highlight Light Nkọwa: (400W LED High Bay Light) Ọnụ ọgụgụ dị elu nke ọkụ H ìhè bụ H series bụ ngwaahịa mgbanwe. Uhie ọkụ ọkụ mbụ - aka 500W na - ekpo ọkụ ọkụ - na ngwaahịa mbụ nwere ike dochie ọkụ 1000W HPS....
Akwa Elu na-esi n'èzí na-enwu ọkụ na 3030 Chip
Ọnụahịa otu: USD 117.58 / Piece/Pieces
Akwa Elu na-esi n'èzí na-enwu ọkụ na 3030 Chip Nkọwa: (150W LED High Bay Light) Ọnụ ọgụgụ dị elu nke ọkụ H ìhè bụ H series bụ ngwaahịa mgbanwe. Uhie ọkụ ọkụ mbụ - aka 500W na - ekpo ọkụ ọkụ - na ngwaahịa mbụ nwere ike dochie ọkụ 1000W HPS. Ụdị H...
Ọnụ mmiri dị elu 120w na-eme ka ndị na-enwu ọkụ
Ọnụahịa otu: USD 99.91 / Piece/Pieces
Ọnụ mmiri dị elu 120w na-eme ka ndị na-enwu ọkụ Nkọwa: (120W LED High Bay Light) Ọnụ ọgụgụ dị elu nke ọkụ H ìhè bụ H series bụ ngwaahịa mgbanwe. Uhie ọkụ ọkụ mbụ - aka 500W na - ekpo ọkụ ọkụ - na ngwaahịa mbụ nwere ike dochie ọkụ 1000W HPS. Ụdị H...
Ọnụahịa otu: USD 51.47 / Piece/Pieces
Nkwakọ ngwaahịa: 270 * 270 * 250mm / CTN 1pcs / CTN 3.9KG / CTN
100W IP65 125lm / w LED High Bay Light Nkọwa: Ụzọ buru ibu iji gosi visibilia n'ebe obosara buru ibu nke oma , Diana nnukwu ahihia bu ihe ndi a choputara na otutu ngwa. A na - emepụta ọkụ ọkụ ọkụ dị elu maka ogologo ụlọ elu na nnukwu ebe .12 000...
Ọnụahịa otu: USD 232.39 / Piece/Pieces
Nkwakọ ngwaahịa: 61cm / CTN 1pcs / CTN 18KG / CTN
500W LED High Bay Light LED Flood Lighting Nkọwa: (500W LED High Bay Light) Ọnụ ọgụgụ dị elu nke ọkụ H ìhè bụ H series bụ ngwaahịa mgbanwe. Uhie ọkụ ọkụ mbụ - aka 500W na - ekpo ọkụ ọkụ - na ngwaahịa mbụ nwere ike dochie ọkụ 1000W HPS. Ụdị H na-eji...
150W AC 85-305V 3/5 Afọ akwụkwọ ikike LED High Bay Lighting
Ọnụahịa otu: USD 65.08 / Piece/Pieces
Nkwakọ ngwaahịa: 200 * 200 * 450mm / CTN 1pcs / CTN 4.6KG / CTN
150W AC 85-305V 3/5 Afọ akwụkwọ ikike LED High Bay Lighting Nkọwa: A na -emepụta ọkụ ọkụ ndị a dị elu na ọkwa ndị kachasị elu na-eme ka ha bụrụ ihe dị mma iji belata ego ndị na- enwu ọkụ n'ebe ọrụ, ụlọ nkwakọba akụ ma ọ bụ ụlọ ọrụ ọ bụla ọzọ....
EC RoHs LED High Bay Light for Warehouse
Ọnụahịa otu: USD 38.35 - 41.55 / Piece/Pieces
Nkwakọ ngwaahịa: 270 * 270 * 220mm / CTN 1pcs / CTN 2.8KG / CTN
EC RoHs LED High Bay Light for Warehouse Nkọwa: Nke a 60W LED High Bay Light e mere maka obere ọrụ & ọkụ nkwakọba ihe iji dochie 70W - 100W Metal Halide, 70W High Pressure Sodium, & Fluorescent lighting systems. Anyị na-arụpụta 5,000 lumens...
Ime ụlọ na ime ụlọ Industrial 100W LED Highbay Light
Ọnụahịa otu: USD 49.95 - 54.11 / Piece/Pieces
Ime ụlọ na ime ụlọ Industrial 100W LED Highbay Light Nkọwa: Ụzọ buru ibu iji gosi visibilia n'ebe obosara buru ibu nke oma, Diana nnukwu ahihia bu ihe ndi a choputara na otutu ngwa. A na-ahazi ọkụ ọkụ ọkụ dị elu maka ogologo ụlọ elu na ebe dị...
Industrial Meanwell Na-efu Ọganihu 100W LED Highbay Light
Ọnụahịa otu: USD 54.11 / Piece/Pieces
Industrial Meanwell Na-efu Ọganihu 100W LED Highbay Light Model NO. AD-GKD-100WF2A
Shenzhen 100W-500W N'èzí LED High Bay Light
Ọnụahịa otu: USD 90.42 / Piece/Pieces
Nkwakọ ngwaahịa: 470 * 470 * 570mm / CTN 1pcs / CTN 12.95KG / CTN
Shenzhen 100W-500W N'èzí LED High Bay Light Model NO. AD-H300-300W
Ike elu High-lumen Industrial LED High Bay Light
Nkwakọ ngwaahịa: 470 * 470 * 570mm / CTN 1pcs / CTN 9.5KG / CTN
Ike elu High-lumen Industrial LED High Bay Light Model NO. AD-H100-100W
Waterproof ikanam High Bay Light 240 Watts
Ọnụahịa otu: USD 78.61 - 85.16 / Piece/Pieces
Waterproof ikanam High Bay Light 240 Watts 240W LED High Bay Light na-ejikarị eme ihe na ụlọ ọrụ, ụlọ nkwakọba ihe, ọpụpụ, elu ụlọ elu, wdg. Akpa ya nwere ike imezi angle angleens. Nke a ọkụ High Bay Light nwere ụdị ọkwọ ụgbọala abụọ. Ọkwọ ụgbọala...
Ọnụahịa otu: USD 46.3 - 50.15 / Piece/Pieces
Bright 100W LED High Bay Light Industrial 100watt GKD LED High Bay Light eji elu àgwà Bridgeux 3030 LED, lumen mmepụta ruru 150lm / w, ibu na-egbuke egbuke na ike na-azọpụta. Ọ na-eji IP65 Meanwell ọkwọ ụgbọala nwere nchedo voltaji, ogologo oge na...
Ụlọ ọrụ na-eji 200W LED Elu Bay Light
Ọnụahịa otu: USD 83.15 - 90.08 / Piece/Pieces
Ụlọ ọrụ na-eji 200W LED Elu Bay Light 200W LED High Bay Light bụ ezigbo nhọrọ ịchọta ìhè ọkụ ụlọ ọrụ. Ìhè ọkụ a bụ ike na ike ịzọpụta. Belata ebubo eletrik. Ihe eji eme ihe na 150lm / w di elu, nke na-egbuke egbuke. Ma ọ bụ Meanwell Driver, dị ka...
Ọkpụkpụ Ezi Ọkụ 150W LED High Bay Light
Ọnụahịa otu: USD 62.49 - 67.69 / Piece/Pieces
Ọkpụkpụ Ezi Ọkụ 150W LED High Bay Light 150W LED High Bay Light nabatara Bridgelux LED, nnukwu arụmọrụ ọkụ tube ikpo ọkụ okpomọkụ , arụmọrụ ka mma. 45 Celsius, 120 Celsius, ụdị ọnụọgụ abụọ nke ị họrọ, tinye ebe dị iche iche. Paremeter ngwaahịa Model...
China LED High Bay Light Ngwa
PC Cooler ikanam High Bay Light:
Nlebara ọkụ ọkụ ọkụ ọkụ ọkụ ọkụ, ọkụ High Bay Light`life oge ruru 50,000 awa. Ịchekwa ihe karịrị 80%. Ihe ngwugwu a dum na - ejizi teknụzụ kpụ ọkụ ọkụ, jikọtara ya na ikpochapụ ihe atọ na - emepụta ihe ọkụkụ na HD, iji nweta nrụpụta ọkụ ọkụ. Mgbanwe ọhụrụ nke ọkụ ọkụ na nke ọkụ ọkụ, nhazi nke ikuku air, njikarịcha nke ọkpụkpụ, akụkụ nke okpukpu atọ nke ikpo ọkụ. Kwesịrị ekwesị maka 25 Celsius, 45 °, 60 °, 90 Celsius, 100 ° multi-angle aluminum reflector, iji gboo mkpa ndị ọkachamara nke nkesa ìhè.